Dhanieri 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
‘Nguva yekuguma’ uye painenge yapfuura (1-13)
Mikaeri achasimuka (1)
Vane njere vachapenya (3)
Zivo yechokwadi ichawanda (4)
Dhanieri achamukira mugove wake (13)
12 “Nguva iyoyo Mikaeri*+ muchinda mukuru,+ uyo ari kumira achirwira vanhu vako, achasimuka. Pachava nenguva yekutambudzika isina kumbovapo kubvira pakatanga kuumbwa rudzi kusvika panguva iyoyo. Uye panguva iyoyo vanhu vako vachapukunyuka,+ ivo vanhu vese vanowanikwa vakanyorwa mubhuku.+ 2 Vazhinji vakarara muguruva renyika vachamuka; vamwe vachamuka kuti vararame nekusingaperi uye vamwe vachamuka kuti vashorwe uye vazvidzwe nekusingaperi. 3 “Vaya vane njere vachapenya sechiedza chekudenga; uye vaya vari kuita kuti vazhinji vave vakarurama vachapenya senyeredzi nariini nariini. 4 “Asi iwe Dhanieri, vanza mashoko acho, uname bhuku racho kusvika panguva yekuguma.+ Vazhinji vachamhanya-mhanya,* uye ruzivo rwechokwadi ruchawanda.”+ 5 Ini Dhanieri ndakabva ndatarisa ndikaona vamwe vaviri vakanga vakamira, mumwe kune mamwe mahombekombe erukova uye mumwe kumahombekombe aiva mhiri kwerukova rwacho.+ 6 Mumwe akabva ati kumurume akanga akapfeka nguo yejira+ aiva pamusoro pemvura yerukova rwacho: “Zvichatora nguva yakareba sei kusvika pachapera kuzadziswa kwezvinhu izvi zvinoshamisa?” 7 Ndakabva ndanzwa murume akanga akapfeka nguo yejira, uyo aiva pamusoro pemvura yerukova achipindura. Akasimudza ruoko rwake rwerudyi neruoko rwake rweruboshwe mudenga akapika naiye* anoramba ari mupenyu nekusingaperi+ achiti: “Zvichaita nguva imwe chete yakasarudzwa, nedzimwe nguva dzakasarudzwa, nehafu yenguva.* Pachangopera kuputswa-putswa kwesimba revanhu vatsvene,+ zvinhu izvi zvichabva zvasvikawo pamagumo azvo.” 8 Ini ndakazvinzwa, asi handina kuzvinzwisisa;+ saka ndakati: “Nhai ishe wangu, zvinhu izvi zvichaguma nei?” 9 Akabva ati: “Enda, Dhanieri, nekuti mashoko acho anofanira kuvanzwa uye kunamwa kusvika panguva yekuguma.+ 10 Vazhinji vachazvigeza vozvichenesa uye vachanatswa.+ Vakaipa vachaita zvakaipa, uye hapana kana vakaipa vachanzwisisa; asi vaya vane njere vachanzwisisa.+ 11 “Kubvira panguva inenge yabviswa chibayiro chinogara chichipiwa+ uye panenge paiswa chinhu chinonyangadza chinoparadza zvinhu zvese,+ pachava nemazuva 1 290. 12 “Anofara ndiye anoramba akamirira* uye anosvika pamazuva 1335! 13 “Asi iwe ramba wakasimba kusvika pamagumo. Uchazorora, asi uchamukira mugove wako* pachapera mazuva acho.”+
^ Kana kuti “vachanyatsoriongorora [kureva bhuku racho.]”
^ Kana kuti “anomirira nemwoyo wese.”
^ Kana kuti “uchamuka munzvimbo yako yauchapiwa.”